Izitayela Zezinwele zango-2022: Izihloko Zezinwele Ezishisayo zango-20 – SL Raw Virgin Hair LLC.
Hlola izihloko zezinwele ezishisa izikhotha zika-2022. Bona ukuthi kungani amawigi e-u-part nama-microlink esohlwini lwezihloko ezishisayo kanye namathrendi ezinwele ka-2022.
Mar 14, 2022 | SL Raw Virgin Hair
Iminyaka emibili edlule ibimayelana nokuhlala emzileni wakho, inani elithile lokuzama, kanye nesitayela se-DIY. Lo nyaka uzoba ongavamile.
Njengoba siphuma ekubanjweni yilolu bhubhane futhi silwela ukuba nesibindi empilweni, lokho nakanjani kuzobonakala ngezitayela zethu zomuntu siqu. Futhi iyiphi indawo yokuqala esivame ukuyicabangela lapho sifuna isiqalo esisha noma uguquko?
Izangoma zibikezela ukuthi u-2022 uzobe emayelana nokusho nokuphuma ezindaweni zethu zokunethezeka. Ukuzama izinto ezintsha. Ukubukeka njengezintandokazi ezedlule. Ukuhlola amathrendi ezinwele ashisa kakhulu ango-2022.
Ngakho-ke, sibuze endlini yethu umlungisi wezinwele osaziwayo kanye nabanye ukuthi yini esingalindela ukuba izihloko zobuhle ezishisayo zango-2022.
Ukunyakaza, izendlalelo, ubude (nama-microlink)
Abalungisa isitayela bathanda ukukhetha komzimba ogcwele nokunyakaza kumakhasimende abo ngo-2022.
Abantu babheke ngabomvu ukugcina ubude babo futhi bengeze izendlalelo noma ivolumu noma kokubili. Ama-stylists alungiselela ukuletha izindlela ezibukeka ngokwemvelo neziphephile zokuthuthukisa ukunakekelwa kwezinwele. Futhi ngenkathi isu lama-microlinks lisebenza ngaphansi kwe-radar isikhashana, ungalindela ukuthi le nqubo ibonakale kakhulu ngo-2022.
Ukuduma kwale ndlela kuyakhula ngempela futhi kungenzeka kuqhubeke kukhuphuka unyaka wonke. Ku-TikTok kuphela, kube nokubukwa okungaphezu 74M (kanye nokubalwa) kwamavidiyo ahlobene ne-microlink. Ngakho-ke, ngeke kwehle noma nini maduze.
Akuyona nje indlela enhle kakhulu yokwengeza ubude nezingqimba, kodwa futhi ilungele labo abafuna izinwele zezinwele zesikhathi eside ezigcina ubuhle bayo. Ukusuka kokucwebezelayo, okuqondile ukuya kuma-curl agxumayo, izinketho zikhona ukuze uphume endaweni yakho yokunethezeka ka-2022 usebenzisa isu le-microlink lezandiso zezinwele.
Ngakho-ke, bamba I-thiphu yakho izandiso zezinwele zemvelo bese utshela olungisa izinwele ukuthi usulungele izendlalelo, ubude, ukuminyana, nokunyakaza 2022.
Isitayela sokunakekelwa okuphansi siku
Yebo, sesikulungele ukuphuma futhi sibe nesibindi Kodwa sisafuna ukwenza kanjalo kalula.
Ngakho, lokho kusho izitayela ezinhle osekulula ukuzinakekela. Izandiso zezinwele eziza nokusetshenziswa okulula, akukho ukunakekelwa kwengcindezi, nokuphila isikhathi eside kuyisimiso sosuku.
Ukufeza lokho, silindele ukubona izingxoxo ezengeziwe mayelana namawigi we-u-part kanye nama-closure. Lezi zinwele zabesifazane abanekhwalithi yezandiso zezinwele zabantu zizobonakala ngokugqamile ngo-2022.
Amawigi e-U-part kanye amawigi e-lace closure anikeza ukuguquguquka yokugqokwa okusheshayo nokulula kanye nezinketho eziningi zesitayela. Izinwele zehle izolo. Ponytails namuhla. Okwenziwayo kusasa. Uthola ukukhukhuleka. Ziyindlela enhle yokwengeza ubude nevolumu ezinweleni zakho futhi wandise izinketho zakho zesitayela.
Futhi, ungakwazi njalo ukukhetha ukuthungwa okufana eduze neyakho, ngakho kuwushintsho olungenazihibe. Isibonelo, kukhona i-Brazilian eqondile, i-Kinky Curly hair textures, nayo yonke into ephakathi. Ngakho-ke, ukudlula u-2022, ungaba nesibindi futhi ukhululeke ngezitayela ozizamayo.
Ithiphu yochwepheshe: Uma ugxumela ngale threndi yewigi yango-2022, qiniseka ukuthi utshala imali endaweni yokuma yewigi Futhi uphathe izinwele ngendlela obungenza ngayo ezakho ukuze uzinakekele isikhathi eside. Iwigi yakho entsha ye-BFF izokubonga ngayo.
Ukubukeka kwemvelo konke
Kwabanye bethu, ukuzitholela thina ngo-2022 kusho ukuthi siseduze nemvelo ngangokunokwenzeka
Ngakho, sifuna izitayela ezifaka izinwele zethu zemvelo - kungakhathaliseki ukuthi zikhululekile noma zisesimweni sazo semvelo.
Futhi, ochwepheshe be-microlink bazofaka okukhulu kulesi sici. Inqubo ye-microlink ivumela amakhasimende ukuthi athole izitayela ezihlala ziseduze nezinwele zabo zemvelo kangangokuthi cishe akunakwenzeka ngezinye izikhathi ukubona umehluko.
Ngakho-ke, akukho ukukhathazeka ngokuba ngokwemvelo ngenkathi ufuna okwengeziwe. Abaningi basesikhaleni esifanayo nesakho ngo-2022. Futhi bathole isixazululo nge-keratin I-amathiphu izandiso zezinwele noma ukusebenzisa inqubo ye-microlink enama-wefts wokufakwa kwe-braidless weave.
Okuthunyelwe okwabiwe ngu-Carolyn Davis (@candistyles921)
Izinwele zezinwele ezilula kodwa zikanokusho zenza inguquko enkulu
Cabanga ngamahhashi amancane amade Amagagasi amnene. Ama-curls. Izitayela ezindala ngempilo entsha.
Futhi, into enkulu yalezi zinwele ezinhle kuzoba izinsiza ze-microlink. Le sevisi ibekwe ngendlela ehlukile ukuthi iqale ngo-2022 ngenxa yezinketho eziningi ezinikeza ama-stylists namakhasimende abo. Futhi uma bobabili sebetshale imali ezandisiwe zezinwele zekhwalithi ephezulu zale nqubo (kungakhathaliseki ukuthi ama-I-tips noma ama-wefts), bazoba nezitayela zezinwele ezimangalisayo ezinyangeni ezizayo.
Futhi ukwenza isitayela akufanele kube nzima nakho. Ungakwazi ukuzuza ama-curl alula usebenzisa eyodwa yalezi izindlela eziyisikhombisa zokuthola ama-curl angashisi.
Intuthuko emikhiqizweni yokunweba izinwele
Ngenkathi abantu bechitha iminyaka embalwa edlule bezama ekhaya, izinkampani zezinwele zichithe leso sikhathi zicwaninga futhi zenza imikhiqizo emisha yemakethe.
Embonini yokunweba izinwele, i-SL Raw Virgin Hair isaqhubeka nokugqama uma kuziwa ekukhiqizeni imikhiqizo esemfashinini efunwa abantu. Isibonelo, umsunguli wethu usevele wangena ku-2022 ngokuthuthukiswa kwe-fit n’ go wig entsha ngemva kwezinyanga zocwaningo.
“Sichithe izinyanga zocwaningo nokuhlola ukuze senze kahle kakhulu amayunithi ethu amathathu ewigi angenaglue, futhi sijabule ukwabelana ngale minikelo emisha namakhasimende ethu,” kusho u-LeAna McKnight, Umsunguli we-SL Raw Virgin.
Futhi okuningi kuseza.
Ngakho-ke, isikhathi esijabulisayo sokusungula izinto ezintsha kanye nokuzama ukuthuthukisa imikhiqizo emisha yezinwele. Izinkampani zezinwele zibheka izindlela zokusiza amakhasimende ukuthi aqhubeke nokuthuthukisa ubuhle, ajabulele ukusetshenziswa kalula, futhi angene ku-2022 abe nesibindi. Silindele ukubona okwengeziwe kwalokhu kuthambekela kwabanye abathuthukisi bemikhiqizo yobuhle abaseduze nemboni yokunweba izinwele zabantu.
Imaphi amathrendi ezinwele ka-2022 ozozama?
Uma usukulungele ukukhohlwa ukukhungatheka kwezinsuku zezinwele ezimbi kanye nengcindezi ye-DIY, sekuyisikhathi sokubheka phambili onyakeni wakho ongcono kakhulu futhi wenze okukulethela injabulo.
Imboni yezinwele yenza izinto ezinkulu, futhi amanye amabhrendi athatha isinyathelo esiqhubekayo ukuze aqinisekise ukuthi amakhasimende abo afinyelela izandiso zezinwele ezisezingeni eliphezulu ukuze abonise abantu bawo bangempela, abasha, nabasafufusa.
Ngakho-ke, zilungiselele ukusethela ithrendi ngokwakho futhi ube inguqulo engcono kakhulu yakho.
NEW Brazilian Body Wave U-Part Wig
2022 hair trendsbeauty trendsbest hair of 2022fit 'n' go wigshair bloghair extensionshair trendshot topicsmicro linkmicrolinksnew year new youSL Raw Virgin Hairu-part wigs